I-Oracle imemezele ukukhishwa kweJava SE 15, yazi ukuthi yini okusha | Kusuka kuLinux
Ngemuva kwezinyanga eziyisithupha zentuthuko, I-Oracle imemezele ukukhishwa kwe- inguqulo entsha ye I-Java SE 15 njengokuqaliswa kwesethenjwa okusebenzisa iphrojekthi yomthombo ovulekile we-OpenJDK.
I-Java SE 15 ihlukaniswa njengenguqulo yokusekela ejwayelekile, ngezibuyekezo ezizokhishwa kuze kube yinguqulo elandelayo. UJlezi SE 11 kufanele zisetshenziswe njengomlenze wesikhathi eside wokusekela (LTS) nezibuyekezo zizokhishwa kuze kube u-2026. Igatsha langaphambilini le- I-Java 8 LTS izosekelwa kuze kube nguDisemba 2020. Ukukhishwa okulandelayo kwe-LTS kuhlelelwe uSepthemba 2021.
Izici ezintsha eziyinhloko zeJava SE 15
Kule nguqulo entsha, kwethulwa umsebenzi wokusekela i-EdDSA RFC 8032 Signature, ukuqaliswa okuhlongozwayo kwe-EdDSA akuxhomekile kuzingxenyekazi zekhompyutha, ivikelwe ekuhlaselweni kwesiteshi eseceleni (isikhathi esiqhubekayo sazo zonke izibalo siqinisekisiwe) futhi siphumelela ukwenziwa okukhona kwe-ECDSA okubhalwe ngo-C ngokusebenza, ngezinga elifanayo lokuvikelwa.
Olunye ushintsho yi ukusekelwa kokuhlola kwamakilasi avaliwe kanye nokuhlangana que azikwazi ukusetshenziswa ngamanye amakilasi nezindawo zokuhlangana ukuthola ifa, ukunweba, noma ukungasebenzisi.
Okunye okugqanyisiwe kule nguqulo entsha yeJava SE 15 yiyona ukuxhaswa kwezigaba ezifihliwe ezingasetshenziswa ngqo yi-bytecode zamanye amakilasi. Ukusetshenziswa okubalulekile kwezigaba ezifihliwe kungokwenhlaka ezikhiqiza ngamandla amakilasi ngesikhathi sokugijima futhi zizisebenzise ngokungaqondile ngokubonisa.
Umqoqi kadoti I-ZGC (Umqoqi kadoti) isiqinisiwe futhi yabonwa ukuthi isilungele ukusetshenziswa ngokujwayelekile. I-ZGC isebenza ngemodi yokwenziwa ukunciphisa ukubambezeleka ngenxa yokuqoqwa kukadoti ngangokunokwenzeka (isikhathi sokuphumula lapho usebenzisa i-ZGC ingeqi ku-10 ms) futhi ingasebenza ngezinqwaba ezincane nezinkulu, ezisukela ngosayizi kusuka kumakhulu amaningana kusuka kuma-megabyte kuya kuma-terabyte amaningi.
Umqoqi kadoti UShenandoah uzinze futhi waqaphela ukuthi ukuyo yonke indawo. IShenandoah ithuthukiswa yiRed Hat futhi ivelela ukusetshenziswa kwe-algorithm enciphisa izikhathi zokuphumula ngesikhathi sokuqoqwa kukadoti lapho kuhlanzwa ngokufana nokusebenzisa izinhlelo zeJava.
Futhi ukusekelwa kwamabhulokhi wombhalo kuqinisiwe futhi wangena ngolimi: a ifomu elisha lezintambo ezingokoqobo Ziyakuvumela ukuthi ufake idatha yombhalo we-multiline kukhodi yakho yomthombo ngaphandle kokusebenzisa izinhlamvu zokuphunyuka nokugcina ukufomathwa kombhalo kwasekuqaleni kubhulokhi.
Ngakolunye uhlangothi i I-Legacy DatagramSocket API isetshenziswe kabusha njenge iJava.net.DatagramSocket yakudala ne-java.net.MulticastSocket ukwenziwa kuthathelwe indawo ukuqaliswa kwanamuhla okulula ukulungisa iphutha nokugcina, futhi kuyahambisana nemicu ebonakalayo eyenziwe yiphrojekthi yeLoom.
Uma kwenzeka kukhona ukwephulwa kokuhambisana nekhodi ekhona, ukuqaliswa okudala akukasuswa futhi kungenziwa kusebenze kusetshenziswa inketho ye-jdk.net.usePlainDatagramSocketImpl.
Futhi, ukuqaliswa kokuhlola kwesibili kokufaniswa kwephethini kuhlongozwa ku "instanceof" opharetha, ekuvumela ukuthi uchaze ngokushesha ukuguquguquka kwasendaweni ukufinyelela inani eliqinisekisiwe.
Ekugcineni, ukuqaliswa kokuhlola kwesibili kwegama elithi «irekhodi» nakho kugqanyisiwe, okunikeza ifomu elihambisanayo lezincazelo zesigaba, ukugwema isidingo sokuchaza ngokusobala izindlela eziningana ezisezingeni eliphansi ezifana ne-equals (), hashCode () ne-toString (), ezimweni lapho idatha igcinwa kuphela ezinkambu.
Okokugcina ezinye izinguquko ezigqamile:
Kuphakanyiswa uhlaka lwesibili lwe-API yokufinyelela imemori yangaphandle
Indlela yokusebenzisa iBlocking Locking esetshenziswa yiHotSpot JVM ukunciphisa ukukhiya ngaphezulu ikhutshaziwe futhi yehlisiwe.
Ukwenza kusebenze i-RMI kwendlela esetshenzisiwe engasasebenzi, ezosuswa ekukhishweni okuzayo.
Amachweba asuswe ama-Solaris OS ne-SPARC processors (Solaris / SPARC, Solaris / x64, kanye neLinux / SPARC).
Si ufuna ukwazi kabanzi ngayo mayelana nale nguqulo entsha. Ungahlola imininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukuhlela » I-Oracle imemezele ukukhishwa kweJava SE 15, yazi ukuthi yini okusha
I-UltimateWM, i-VTWM, i-Wayland, i-Wingo, i-WM2: ama-WM amanye ama-5 we-Linux
I-Deepin Linux 20 iyatholakala futhi iza nokuthuthukiswa kwe-boot, ukufakwa nokuningi